TELES RELAY Jona 18, 2020 0
Ilay talenta kameroney Samuel Eto'o dia nanana asa matanjaka izay nahita azy nandia ny Real Madrid, FC Barcelona ary Inter Milan. Ny Kameroney dia manana ny iray amin'ireo firaketana baolina kitra tsara indrindra, manangona saika isaky ny…
XNXX: Mpanao sary vetaveta nivadika ho minisitry ny kolontsaina kristianina?
EMMA ELISE KAMGANG Jona 11, 2020 0
Nanova tanteraka ny fiainany ilay mpilalao sarimihetsika vetaveta taloha, Alexandre Frota taorian'ny nihaona tamin'Andriamanitra. Rehefa nandray andraikitra tamin'ny maha-filoham-pirenena an'i Brezila tamin'ny Janoary 2018 i Jair Bolsonaro dia nieritreritra momba ny famoronana ...
Ataony an-keriny ny fakana an-keriny azy: tovovavy tanora voasambotra tany Nizeria
TELES RELAY Jona 7, 2020 0
Seun Adekunle, 17 taona, dia noahiahy ny nahatonga ny reniny hino fa nalaina an-keriny izy mba ho avotra. Nosamborin'ny polisy niaraka tamin'ny sipany tao atsimo andrefan'i Nizeria izy. Voampanga ho nametraka ...
Ireo albino izay nifanena tamin'ny mpilalao ody nampiasa faritra ao amin'ny vatan'olombelona tao anaty potions "...
bryanekobe Jona 5, 2020 0
Ilay albino izay nifanena tamin'ny mpamosavy nampiasa ny vatan'olombelona tamin'ny «zava-mazoto» dia niondrana i Stéphane Ebongue nandositra an'i Cameroon noho ny lokon'ny hodiny - ny alibany dia nahatonga azy ho lasibatra ho an'ireo izay mino fa ...
Nilaza i Donald Trump fa izy no filoha mainty hoditra tsara indrindra any Etazonia nanomboka tamin'i Lincoln. Marina?
TELES RELAY Jona 5, 2020 0
Vao nieritreritra ianao fa tsy mahazo olon-tsy fantatra dia nanoratra tamin'ny Twitter ny talata ny Filoha Trump fa "nanao bebe kokoa ho an'ny vondrom-piarahamonina mainty noho ny filoha rehetra hatramin'ny nanoratan'i Abraham Lincoln." Mazava ho azy,…
Nampangaina ho mpamosavy, machete novonoina
TELES RELAY Jona 4, 2020 0
Nalevina tao amin'ny 9 Mey tao Tao-Mbrao izy. Amin'izao fotoana izao dia eo am-panafoanana ny zandarimariam-pirenena Datcheka izy ankehitriny. Heloka bevava any TaoMbrao, ao amin'ny distrikan'i Datchéka. Joseph Falsou, 61, manamboninahitra monisipaly, dia manana…
Afrika: ny fihetseham-po manaitra ny resaka ody ratsy.
bryanekobe Jona 4, 2020 0
Afrika: ny fihetseham-po manaitra ny resaka ody ratsy. Ao amin'ireo andian-tsoratra avy amin'ireo mpanoratra afrikana, ny mpanao gazety Nizeriana sady mpanoratra mpanoratra, Adaobi Tricia Nwaubani, dia mitantara ny fihetseham-po nateraky ny lohahevitra…
Ny mpiasan'ny firaisana dia manambara ny tolona hahafahany mivelona amin'ny Covid-19
TELES RELAY Jona 1, 2020 0
Ny faritra fanaovana firaisana dia tsy raisina ho "serivisy ilaina" mandritra ny fanagadrana vokatry ny coronavirus. Ekena fa i Anna, tovovavy mpivarotra mpivady mpihaza mipetraka any Genève, dia nanohy ny fahitan'izy ireo na dia teo aza ny fitandremandron'ny ...
Ny fandevenana ny reniko no andro nahatsapako fa namako ny namako be indrindra…
TELES RELAY Dec 18, 2019 0
Maty ny fahafatesan'ny ray aman-dreny mazàna ary mitory korontana eo amin'ny fiainan'ny olona iray. Na manaraka ny aretina na maty amin'ny loza ny fahafatesana, dia tsy azo ihodivirana ilay fanaintainana tsapan'ny fianakaviana akaiky. Ankoatr'izay, ny…